Our Approach -APICMO cdmo Warshadaha
Qalabka teknoolajiyadda iyo habka caadada ah, wuxuu ka caawin karaa cilmi-baarayaasha inay xoojiyaan nidaamka R & D ee kiimikada iyo daawooyinka.
APICMO waxay si gaar ah u siisay macaamiisha ICH iyaga oo leh tayo sare oo tayo sare leh oo jaban APIs. Dhammaan alaabooyinka ay bixiso xarunteeda wax soo saarka China ee APICMO ayaa si buuxda loo tijaabiyay ka hor inta aan loo soo dirin si loo xaqiijiyo tayada alaabta. Adeeggan wuxuu hubiyaa in macaamiisha APICMO ay helaan alaab tayo leh mar kasta.
APICMO waxay ka go'an tahay inay ixtiraamto sharafta kiimikada kiimikada kiimikada si loo hubiyo in dhammaan adeegyadeena iyo alaabooyinkeena ay yihiin jawi bey'adeed.
APICMO waa ISO 9001: 2008 shahaadada iyo dhammaan hawlaha ganacsiga waxay ku tiirsan yihiin heerarka maareynta tayada caalamiga ah.
Shirkadda R & D ee Rugta ah ee Shiinaha, 5 labadaba isku xira jaamacadaha, xarumaha waxsoosaarka ee 2 ee Henan iyo Jiangsu, iyo shabakad ballaadhan oo laga helo Shiinaha, APICMO waaxda ugu wayn ee khibrad u leh horumarinta iyo soosaarka qalabka heterocyclic (sida piperidines, piperazines, pyrrolidines ...), xayawaanka spiro, asaasiga boronis, benzens, amino acids iyo peptides, xayawaanka chiral, inhibitors, nucleosides & nucleotides, APIs, iwm.